Moggaasa – Maqoota Oromoo fi Hiika Isaani - List of Names for your children -
Moggaasa – Maqoota Oromoo fi Hiika Isaani – List of Names for your children
New Book: Moggaasa – Maqoota Oromoo fi Hiika Isaani – List of Names for your new born
This is a must have book if you want to select appropriate name for your new born (child). It has a list of all names in Oromia with definition.
Maqoota Oromoo fi Hiika isaani
“Fooli gaarii mannaa maqaaa gaarii wayya jedhe arjaan.”
“Maqaa gaariin urgooftuu gati-qabeessa caalaa namatti tola.”
Maqaan akkuma namummaa (bifa fi qaama) ifii, jireenya namaa keessatti bakka ol’aanaa sababa qabuuf, abbaa fi haati maquma taheef jech dhal ifiif hin baasan. Barreeffamni kun maqaa shagaa hawwif fi fedhii haadhaa fi abbaa akkasuma haalaa jiru kan calqisu akka filtaniif salphisaaf. …
Barreffamni kun aadaa fi gamnuummaa Oromoo kan sirna moggaasaa bif hubatamuun bal’inaan dhiheessera. Sirna moggaasaati dabale maqooti 5,000 ol tahan hiikaa isaanii waliin argamu. Barreeffamni kun mucoolee keet maqootaa sitti tolan filatee moggaasuuf aanjaa gaarii uume. Hiikaa qofa osoon hin taane ayyaana ijoolleen dhalatanis barreeffamich ni akeeka. …
Barreefamni kun eenyumaa saba kiyyaa fi beekums bal’aa dhaalmaan inni qabu caalaatti akkan hubadhuuf na gargaare. Barreeffama kana dubbisuun ooggummaa saba kiyyaa caalaatii baradhee. …
Barreeffamni kun sirna maqbaasii Oromoo gad-fageenyaan qoratame bif ifaa fi nama harkisuun dhiheesse. Beekumsi an barruu kana keessaa argadhe aadaa saba kiyyatti daran na boonse! ..
1. Maqoota Oromoo 6,000 ol tahan qabateera.
2. Maqootii kanneen keessaa 5,000 kanneen tahaniif hiikaan laatameera.
3. Dabalees, dhahata yeroo Oromoo hordofuun ayyaana (carraa) mucooleen dhalatan akeeka.
Barreffamni kun beekumsa aadaa waaraa Oromoo bal’inaan qabateera
Gatiin US$25.00 + postage charges
Bituuf kana tuqaa –
← ችግራችን ተፈትቶ የተነፈግነው ፍትህ የሚረጋገጠው ነጻነታችንን ተቀዳጅተን የሚበጀንን መንግስት ስንመሰርት ብቻ ነው SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Adoolessa 18, 2018 →
2 thoughts on “Moggaasa – Maqoota Oromoo fi Hiika Isaani – List of Names for your children”
Shafe August 14, 2018
Itti Guutii Soft Copy Saa Nuuf Ergi
chucha ayana October 19, 2018
maqaa oromoo fi hiika isaanii